"Fanomezana an'i Malinovka" amin'ireo orinasa tsara indrindra ao amin'ny complex agro-industrial ao amin'ny Faritanin'i Krasnoyarsk dia nahazo "Sofina volamena" - Journal "System Potato"
в Success Story, vaovao, Vaovaon'ny orinasa
Notolorana amboara « Sofina volamena » ireo orinasan’ny faritra izay nahazo vokatra ambony tamin’ny asany taorian’ny taom-pambolena. Ny loka dia natolotry ny filoha lefitry ny Governemanta Krai - Minisitry ny Fambolena sy ny Varotra Leonid Shorokhov ary ny Filohan'ny Komitin'ny Raharaha Ambanivohitra sy ny Politikan'ny Agroindustrial an'ny Antenimieram-pirenena ao amin'ny Krai Vladislav Zyryanov.
“Tsy miverina intsony ny taom-pambolena tsirairay, ary sarotra ny 2021. Noho ny lohataona lava dia saika vita "eo amin'ny sainam-pirenena" ny taom-pamafazana, nisy ny olana mifandraika amin'ny tsenan'ny tsena, ny fiakaran'ny vidin'ny vilona. Na izany aza, ny vokatra eo anelanelany dia manondro fa ny Siberiana dia afaka niatrika ny asa be dia be. Olona beton no ao ambadiky ny vokatra rehetra. Ny zavatra ataonao dia mitovy amin'ny zava-bita, ”hoy i Leonid Shorokhov nanamafy.
Ny orinasam-pambolena Krasnoyarsk "Dary Malinovki" dia nomena kaopy roa "Golden Ear" - ho an'ny vokatra tsara indrindra amin'ny ovy sy legioma ao amin'ny faritra. “Faly izahay amin'ny fijinjana amin'ny taona 2021. Ny vokatra ovy, arakaraka ny sokajy (voa - latabatra, aloha - tsy aloha), dia miovaova amin'ny 25 ka hatramin'ny 45 taonina isaky ny hektara, ny salan'isa dia eo amin'ny 30 taonina isaky ny hektara, - hoy i Vasily German, filohan'ny filankevi-pitantanana. an'ny LLC Agricultural Production Enterprise DaryMalinovki. - Mazava fa maniry bebe kokoa hatrany ianao, ary amin'ny fitsipika dia misy zavatra ahafahanao manatsara ny vokatra. Ary amin'ny taona ho avy, manantena izahay fa ho ambony kokoa ny vokatra ”.
Ny «Potato Potato» tao Dimitrovgrad dia nahazoana vola 6,5 tapitrisa